Election Results: Ka o si gaa na mmeju Ntuliaka 2019 - BBC News Ìgbò
Na Eme OzugboNa Eme Ozugbo
Inec akpọpụtala Ganduje dịka onye meriri na ntụliaka gọvanọ Kano
Nke na-eme n'Alaigbo nakwa na akụkụ Naijiria ndị ọzọ dịka a na-eme mmeju Ntuliaka 2019
Samuel Ortom emeriela na Benue steeti
Simon Lalong meriri na Plateau
Inec akpọpụtala Ganduje dịka onye mmeri
Ebisara na 13:56 Mar 25, 201913:56 Mar 25, 2019
E nweghị ọgbaghara ọbụla na Kano
Akụkọ na-efegharị na soshal midia kwuru na ọgbaghara dapụtara na Kano ka a kpọpụtachara Umar Ganduje dịka onye meriri na ntuliaka.
Kepukepu ahụ na-eso mgbopụta Inec kpọpụtara Abdulahi Umar Ganduje dịka onye mmeri na mmeju ntuliaka e mere na steeti ahụ na agbanyeghị mkpesa tigbuo-zogbuo sochiri ntuliaka ahụ e mere na Satode.
Mana nchọpụta ndị ntaakụkọ BBc mere na steeti ahụ kwuru na ọ nweghị ndị ha hụrụ na-eme ngagharịiwe ebe ọ bụla na Kano taa bụ Monde.
Ebisara na 20:02 Mar 24, 201920:02 Mar 24, 2019
Ganduje Abdulahi emeriela ntuliaka ọkwa gọvanọ na Kano
Kano state/twitterCopyright: Kano state/twitter
Ganduje onye ji ọkọlọtọ APC zọ ọchịchị gọvanọ na Kanọ steeti emeriela dịka Inec si kpọpụta ugbua.
O nwetere vootu ruru otu nde na uma (1,033,695) ebe onye so ya n'azụ bụ Abba Yusuf, onye otu PDP nwetere vootu ruru otu nde na ụma(1,024, 713). Ganduje ji vootu ruru puku asatọ n'ụma wee gafee Yusuf.
Ebisara na 18:53 Mar 24, 201918:53 Mar 24, 2019
Lalong azọtala oche gọvanọ ọzọ na Plateau
Onye bụ gọvanọ Plateau steeti kamgbe afọ anọ bụ Simon Lalong emeriela ntụliaka nke ọkwa gọvanọ steeti ahụ.
Lalong bụ onye otu APC ritere vootu ruru puku narị ise na ụma iji wee merie onye so ya n'azụ bụ Jeremiah
Useni onye ritere vootu ruru puku narị ise na ụma mabụrụkwa onye otu PDP.
Lalong bụbụ gọvanọ na-achị PlateauImage caption: Lalong bụbụ gọvanọ na-achị Plateau
Ebisara na 15:32 Mar 24, 201915:32 Mar 24, 2019
Ortom alaghachitela ọzọ dịka gọvanọ Benue
Inec akpọpụtala gọvanọ Samuel Ortom dịka onye meriri ntuliaka gọvanọ na Benue steeti.
O nwetere vootu ruru narị puku anọ na ụma ebe onye so ya n'azụ bụ onye otu APC,Emmanuel Jime
nwetere vootu narị puku atọ n'ụma. Inec gakwara n'ihu kwuo na onye ụlọọrụ ha ndị omekome gbara egbe mgbe o na-ebuga mpụtara ntuliaka mmeju ebe a ga-agụkọ ya nọ n'ụlọ ọgwụ ugbua anata ọgwụgwọ.
Ebisara na 13:06 Mar 24, 201913:06 Mar 24, 2019
PDP emeriela n'okpuruọchịchị anọ n'Imo
PDP ketara oke ukwu n'ime ntuliaka mmetọpụ e emere n'Imo steeti n'ụbọchị satọde.
Ihe mpụtara gosiri na PDP were Ngor-Okpala, Orlu, Oguta nakwa Ikeduru.
Ebe otu AA meriri sọsọ n'okpuruọchịchị Isu.
Ebisara na 12:23 Mar 24, 201912:23 Mar 24, 2019
Tambuwal emeriela na Sokoto.
Dịka ọ dị ugbua, Inec akpọpụtachala mpụtara si na okpuruọchịchị ndị fọrọ na Bauchi na Sokoto steeti.
Onye ji aha PDP azọ ya bụ ọkwa na Sokoto bụ Aminu Tambuwal bụ onye ha kpọpụtara na ọ zọtara oche Gọvanọ.
Mohammed Bala nke PDP nọ n'ihu na Bauchi mana Inec akpọbeghi aha nke ya.
Ebisara na 17:47 Mar 23, 201917:47 Mar 23, 2019
Obi kooro ndị mmadụ n'elu ugbua na Tudun Wada wọdụ dị na Plateau steeti dịka ụmụntorobịa na ndị ọrụ nchekwa na-amaaka.
Ebisara na 17:34 Mar 23, 201917:34 Mar 23, 2019
Ọ na-ede jimjim na Kano, Plateau,Sokoto ebe tigbo zogbo sochiri mmeju ntulika emere nke gọvanọ na ụlọomeiwe taa bụ satọde.
Onye ji ọkọrọtọ PDP bụ Atiku Abubakar ekwuola n’akara Twitter ya na ọgbaagha aghọla njirimara ya bụ mmeju ntụtilaka ebe atụrụ anya na nke a kwesiri ịka mma dịka a ebe a na-eme ya perempe.
Ebisara na 14:33 Mar 23, 201914:33 Mar 23, 2019
Na Kano, obodo bụ igwe
Tigbuo-zogbuo chiri eze na mmeju ntuliaka nke Kano steeti.
O nwere onye ndị agboro kupụrụ eze, nwe ndị e merụrụ ahụ n'ụzọ dị iche iche dịka ndị agboro na-achụsasị ndị mmadụ ọsọ na Kano.
Ha nyerekwara ndị ntaakụkọ gụnyere ndị ntaakụkọ BBC ọsọ.
Ha ekweghị ka e me ntuliaka n'ọtụtụ ọnọdxdụ atụmvootu.
Mana ndị mmadụ kpọrọ ekwo nkụ pụta atụmvootu n'igwe
Ebisara na 14:10 Mar 23, 201914:10 Mar 23, 2019
N'Ikeduru,Imo, ndị mmadụ pasa n'ụlọ ha
Ntuliaka na-aga n'ihu na Unit 011, Amachara, Ikeduru, Imo steeti.
Mana ụfọdụ ndị biara ịtụ vootu nakwa ndị nnọchịte anya pati tụụ arịrị na o nweghị onye ahụrụ.
ụfọdụ ndị mmadụ gawara ahịa, ebe ụfọdụ nọrọ onwe ha n'ụlọ.
Odo atụmvootu tọgbọ chakoo n'Ikeduru, Imo steetiImage caption: Odo atụmvootu tọgbọ chakoo n'Ikeduru, Imo steeti
Mmadụ ole na ole nọ n'ọnọdụ ntuliaka ka na-aga na Unit 011, Amachara, Ikeduru, Imo steetiImage caption: Mmadụ ole na ole nọ n'ọnọdụ ntuliaka ka na-aga na Unit 011, Amachara, Ikeduru, Imo steeti
Ebisara na 12:44 Mar 23, 201912:44 Mar 23, 2019
Plateau na-ede jijiji
Ndị mmadụ pụtara ịtụ vootu na Plateau steetiCopyright: Ndị mmadụ pụtara ịtụ vootu na Plateau steeti
Mmeju ntuliaka a na-eme na Plateau steeti dị ka ebe a na-akwado agha.
Ndị na-atụ vootu na ndị ọrụ nchekwa e nweghị onye kwere na ọkụ nwere ihe o ji nti oke eme.
Na Tudun Wada Wọọdụ dị na steeti ahụ, ndị ntorobia na ndị ọrụ nchekwa na-adọrịta ụka.
Video caption: Obodo bụ igwe na Plateau steeti ebe a na-eme mmeju ntuliaka 2019Obodo bụ igwe na Plateau steeti ebe a na-eme mmeju ntuliaka 2019
Ndị uweojii na ndị ntorobịa na-adọrịta ụka na Tudun Wada dị na Plateau steetiImage caption: Ndị uweojii na ndị ntorobịa na-adọrịta ụka na Tudun Wada dị na Plateau steeti
Mana ọ bụghị ebe niile a na-eme na steeti ahụ na-agkpọ ghara ghara dịka ndị dị ima, ma ndị ọrụsị sonyere tụọ ntuliaka n'ọnọdụ atunvootu ụfọdụ.
Umar YunusCopyright: Umar Yunus
Nwaanyị dị ime gara ịtụ vootu ya na PlateauImage caption: Nwaanyị dị ime gara ịtụ vootu ya na Plateau
Onye ọrụsị sonyere na atụmvootu na PlateauImage caption: Onye ọrụsị sonyere na atụmvootu na Plateau
Ebisara na 11:31 Mar 23, 201911:31 Mar 23, 2019
Ndị mmadụ apụtaghị ka o kwesiri n'Imo
Ntụliaka ebidola na Unit 004 Amambaa Primary School, Ebikoro Uzoagba, Ikeduru Imo steetiImage caption: Ntụliaka ebidola na Unit 004 Amambaa Primary School, Ebikoro Uzoagba, Ikeduru Imo steeti
Ntuliaka ebidola na ebe ụfọdụ e kwesịrị inwe ntuliaka taa n'Imo steeti.
Mana na ndị mmadụ apụtaghị n'igwe dịka e siri tụọ anya.
Onye ntaakụkọ anyị bụ Paul Chukwu onye na-agagharị n'ebe ndị e nwere ntuliaka kwuru na ntụliaka ebidola na Unit 004 Amambaa Primary School, Ebikoro Uzoagba, Ikeduru Imo steeti mana ebe niile dịka ebe udele nwụrụ.
Ndị mmadụ apụtaghị n'igwe dịka o kwesịrịImage caption: Ndị mmadụ apụtaghị n'igwe dịka o kwesịrị
Ebisara na 11:12 Mar 23, 201911:12 Mar 23, 2019
Bauchi na-ekwo ka idemmiri
Ndị mmadụ achọghị ka a kọrọ ha akọọ maka mmeju ntuliaka na-eme ebe ahụ dịka ọtụtụ pụtara n'ọdọ atumvootu maka ntuliaka.
Ndị pụtara ịtụ vootu na Dass nakwa Bogoro dị na Bauchi steetiImage caption: Ndị pụtara ịtụ vootu na Dass nakwa Bogoro dị na Bauchi steeti
Ndị ọrụ Inec na BauchiImage caption: Ndị ọrụ Inec na Bauchi
Ebisara na 9:29 Mar 23, 20199:29 Mar 23, 2019
N'Enugwu, #MarketMarch na-akpọtụ 'I metụzịna m aka'
A naghị anọ otu ebe ekiri mmọnwụ.
BBC Igbo nọ ugbua n' Ogbete, Enugwu ebe a na-eme na #MarketMarchOgbete.
Nke a bụ ngaghiriiwe ụmụnwaanyị ji agwa ndịahịa sị, 'I metụzịna m aka.'
"Bia zụrụ m ahịa abụghị" bụ ọnụ ka e ji ekwu ya ọ bụghị aka.
Ụmụnwaanyị na-eme ngagharịiwe n'Enugwu na-akwa ndị ahịa kwụsị ị na-emetụ ụmụnwaanyị aka ma ha na-akpọ onye ahịaImage caption: Ụmụnwaanyị na-eme ngagharịiwe n'Enugwu na-akwa ndị ahịa kwụsị ị na-emetụ ụmụnwaanyị aka ma ha na-akpọ onye ahịa
Ebisara na 9:21 Mar 23, 20199:21 Mar 23, 2019
Ntuliaka amalitela n'ebe ụfọdụ na Sokoto
Ewu na ọkụkọ gwụrụ n'ụlọ n'obodo Dogon Daji dị na Sokoto steeti dịka ndị mmadụ pụtara n'igwe ime ntuliaka.
Onye ntaakụkọ BBC gara ebe ahụ kwuru na ntuliaka ebirila ọkụ n'ebe ahụ.
Atụmvootu na-aga n'ihu na Dogon Daji dị na Sokoto steetiImage caption: Atụmvootu na-aga n'ihu na Dogon Daji dị na Sokoto steeti
Ndị na-atụ vootu na Dogon Daji dị na SokotoImage caption: Ndị na-atụ vootu na Dogon Daji dị na Sokoto
Ebisara na 9:07 Mar 23, 20199:07 Mar 23, 2019
Na Kano, a na-achụsasị ụfọdụ ndị pụtara atụmvootu
Ndị mmadụ pụtara n'igwe n' Okpuru ọchịchị Dala dị na Kano steeti mana anya ahụbeghị ndị ọrụ Inec.
Obi koo ndị mmadụ n'elu dịka a na-achụsasị ndị nọchiteanya pati ndị anọghị n'ọchịchị pụtara maka atụmvootu.
E tiri otu nwaanyị nọ na-agbasa ozi sị ndị mmadụ pụta tụọ vootu maka nnwereonwe ihe, dọkaa hijab ya, ebe e nyere ndị ntaakụkọ ọsọ.
Ndị pụtara ịtụ vootu na KanoImage caption: Ndị pụtara ịtụ vootu na Kano
Ebisara na 8:42 Mar 23, 20198:42 Mar 23, 2019
Ndị Sokoto arahụkwara n'ụlọ?
Na Bodinga dị na Sokoto steeti, ozi onye ntaakụkọ BBC bụ Abdou Halilou siri wetara anyị na-ekwu na a gha ọka, o koro n'elu n'ebe ahụ n'ihi ndị mmadụ mara ụzọ pụta ịtụ vootu dịka aja dị n'ala; ma nwoke, ma nwaanyị, nakwa ndị na-eto eto.
Ndị pụtara atụmvootu na SokotoImage caption: Ndị pụtara atụmvootu na Sokoto
Ụmụnwaanyị sọ na ndị pụtara n'igwe maka atụmvootu na SokotoImage caption: Ụmụnwaanyị sọ na ndị pụtara n'igwe maka atụmvootu na Sokoto
Ndị mmadụ pụtara n'igwe na SokotoImage caption: Ndị mmadụ pụtara n'igwe na Sokoto
Ebisara na 8:30 Mar 23, 20198:30 Mar 23, 2019
N'Imo, Ihe gbasara mmeju ntuliaka bidoro ụnyaahụ
Onye ọrụ Inec na-agụkọ akọrọngwa ọrụ atụmvootu n'ụlọakụ etiti(CBN) n' OwereImage caption: Onye ọrụ Inec na-agụkọ akọrọngwa ọrụ atụmvootu n'ụlọakụ etiti(CBN) n' Owere
Ndị Ụlọọrụ INEC na steeti Imo gosiri nkwado ha banyere mmeju ntụliaka 2019 e ji ahọpụta ndị nnọchiteanya nke steeti n'ogbe dị iche iche bụ nke e hiwere ụnyaahụ.
Okpuru ọchịchị ndị nke a metụtara gụnyere: Ikeduru, Isiala Mbano, Ngor-Okpala, Orsu, Isu, Orlu, Oguta nakwa okpuruọchịchị Njaba.
E yighariri ntụliaka a n'ihi ọgbaghara nakwa tigbuo zogbuo pụtara na ntụliaka mbụ e mere.
Inec bagidere atụmatụ ikesa akụrụngwa ndị ahụ dịgasị mkpa eji eme ntụliaka .
Ndị ọrụ Inec na-ekesa akọọngwa ọrụ atụmvootu n'ụlọakụ etiti (CBN) n'OwereImage caption: Ndị ọrụ Inec na-ekesa akọọngwa ọrụ atụmvootu n'ụlọakụ etiti (CBN) n'Owere
Mgbe Paul Chukwu onye ntaakụkọ BBC Igbo gara n'ụlọ ọbaego ukwu CBN n'ụbọchị Fraide, ọ hutara na nkesa akụrụngwa a na- aga n'ihu dịka o si kwesi.
Mbo ọ gbara ịmata etu ụlọọrụ a si akwado kụrụ afọ n'ala, dịka onu na-ekwuru Inec na steeti Imo jụrụ ịza oku akpọrọ ya n'ekwentị.
Mana onu na-ekwuru ndị uweojii na steeti Imo bụ Orlando Ikeokwu, kọwara njikere ndị uweojii dị iji nye ezi nchekwa na ntụliaka a.
Ebisara na 8:03 Mar 23, 20198:03 Mar 23, 2019
O nweghị onye m na-akwado- Buhari
Muhammadu Buhari kwuru sị onye tụnyere onye masịrị yaImage caption: Muhammadu Buhari kwuru sị onye tụnyere onye masịrị ya
Onyeisiala Naijiria bụ Muhammadu Buhari akpọọla ụmụ Naijiria oku ka ha apụta n'igwe tụọ vootu na mmeju ntuliaka 2019 a na-eme taa na mpaghara ụfọdụ na steeti iri na asaa na Naijiria.
Ebisara na 7:59 Mar 23, 20197:59 Mar 23, 2019
Ndewoonu , Igbo bụ ụmụ Igbo!
Taa bụ Maachi 23, ka a na-eme mmeju ntuliaka ọkwa Gọvanọ nakwa ụlọomeiwu na steeti ebe ọ gbajọrọ.
Soro anyị dịka anyị na e wetara gị nke na-eme na mpaghara ụfọdụ na steeti Imo, Bauchi, Sokoto, Adamawa,Kano, Plateau,Benue nakwa ebe ndị ọzọ.